Wajeer oo laga sameeyay wacyigelin ka dhan ah kontarabaanka | Star FM
Home Wararka Kenya Wajeer oo laga sameeyay wacyigelin ka dhan ah kontarabaanka
Wajeer oo laga sameeyay wacyigelin ka dhan ah kontarabaanka
Waaxda ganacsiga ee dowladda hoose ee ismaamulka Wajeer oo kaashanaysa mas’uuliyiinta laanta dowladda dhexe u qaabilsan la dagaalanka badeecooyinka kontarabaanka ah ayaa wacyigelin sameysay.
Barnaamijkan ayaa lagu qabtay maqaaxida Grand Oasis ee magaalada Wajeer.
Waxaa ka qayb galay saraakiil ka kala socotay waaxyaha dowladda iyo shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay.
Ka qayb galayaasha ayaa fursad loo siiyay inay soo bandhigaan aragtidooda ku aaddan la dagaalanka ganacsiga sharci darrada ah iyo sida ay gacan uga gaysan karaan dadaallada uu wado maamulka ACA.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka dalka oo diyaar u ah in hantidiisa la qiimeeyo
Next article5 xubnood oo ka mid noqonaya TSC oo la ansaxiyay
Waalidiinta Mandera oo ka hadlay fahamka ay ka haystaan manhajka cusub ee waxbarashada Iyadoo dhawaan maxkamadda la geeyay dacwad lagu doonayo in la joojiyo dhaqangelinta...